Santiago, Shilia: Rafitra Vaovao ho Fitateram-bahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2017 6:58 GMT
Ny tapaky ny volana Febroary 2007 no nanamarika ny fiandohan'ny rafitra vaovao ho fitateram-bahoaka, antsoina hoe Transantiago (ES). Nampiasa vola (ES) 292.5 tapitrisa Dolara Amerikana ny fitondram-panjakana sy ireo orinasa tsy miankina. Olana lehibe ny fanovàna ny rafitry ny fitaterana, satria tsay maintsy manova ny fahazaran'ny olona ihany koa ry zareo. Tsy misy vola madinika intsony, tsy mila miandry intsony. Tsy misy dia lavitra atao intsony. Ampiharina ao amin'ny renivohitr'i Santiago izay ahitana mponina maherin'ny 5 tapitrisa ity rafitra ity.
Tamin'ny andro voalohany, fitarainana an-jatony momba ilay tolotra no nivezivezy tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Shiliana. Izay fiovam-pitondran-tena ara-tsosialy rehetra dia mila fotoana hizàrana azy avokoa. Vao nanomboka tamin'ny 10 Febroary io rafitra vaovao io noho izany mila fotoana isika mba hizàrana azy.
Manana ny fahitany manokana momba ny Transantiago i Luis Alarcón (ES), izay manome antsika hevitra ihany ny momba ity rafitra fitaterana ity taloha sy ny halehiben'ny fiovàna:
Alaivo sary an-tsaina izao manaraka izao: “Mandeha miasa ianao ary miditra ao anatin'ny fitateram-bahoaka maoderina izay tonga amin'ny fotoana voatondro. Rehefa handoa vola, tsy mila vola madinika, fa mampisosa karatra amin'ny fitaovana famakiana izany ary hanàla amin'ny tahirinao. Misy fiakarana kely ho an'ny olona manana fahasembanana sy “Braille” ho an'ny olona jamba izany. Ankoatra izany, mahafinaritra sady mahalala fomba ireo mpamily. Mety ihany koa mila mifindra fiara ianao vao tonga any amin'ny toerana tianao haleha, nefa tsy maninona izany, mivoaka ilay fiara fitaterana ianao ary miditra amin'ny iray hafa fa tsy mila miala vola. Na azonao atao ny mampifandray ny dianao amin'ny iray amin'ny fiarandàlamby ambanin'ny tany izay mandeha manerana ny tanàna.
Mety ho tanàna Eoropeana sasany na tanàna tena mandroso ity sary ity, saingy tsia, aty Santiago Shilia aty Atsimon'i Amerika, io no mitranga, antsoina hoe “Transantiago”, ary fanamby ambony ho an'ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny fanomezana baiko hanaovana fiantsonan'ny fitateram-bahoaka goavana be, mampiakatra ny kalitaon'ny fiainan'ny olom-pirenena arakaraky ny fanakaikezana ny faha-roanjato taona, ary ambonin'ny zavatra rehetra, hanova tanteraka ny fitaterana an-tanàndehibe.
Raha namaritra ny zava-nitranga nandritra ny andro vitsy lasa sy ny fanehoankevitry ny mponina, nanoratra i Cristián Muñoz (ES)
Taorian'ny andro telon'ny tanàna iray efa saika rava, famantarana kely ny korontana an-tanàn-dehibe, tamin'ny fampisehoana ny endriny ratsy indrindra, ny endrik'i Santiago tsy voarindra, miverina amin'ny laoniny ny rehetra nony farany, nahomby, nizatra ary nivaha ny fototry ny olana. Miasa ny Transantiago. Eny e, afaka miteny ianao hoe adala aho, izay no antony maha-olona manana fijery miabo ahy sns sns. Fa tsy izany, tena nitsikera ilay rafitra aho, nefa mila hitantsika fa miha-tsara ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao. Miha-matetika kokoa ny fisian'ny fiara fitateram-bahoaka, tsy be olona mijanona mahavariana intsony ny toeram-piantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka, tsy toy izany intsony. Amin'izao fotoana izao, efa milamina tsikelikely ny zavatra rehetra. Ankoatra izany, nanomboka nampiasa vahaolana voasaina tsara ihany koa izy ireo. Amin'izao fotoana izao, mahita filaharana eny amin'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka isika, zavatra izay tsy fahita mihitsy teto Santiago. Mahatsapa ny olona fa tsy misy azo iverenana ary tsy maintsy mampiasa filaminana izy ireo. Ary farany, tsara ho an'ny tsirairay ilay rafitra. Ny zavatra hafa dia nanapaka hevitra ny talen'ny fiarandàlamby mandeha any ambanin'ny tany (na nasaina nanapaka hevitra) fa hanitatra ny fandaharam-potoanan'ny fiarandàlamby ao an-drenivohitra. Amin'izao fotoana izao, mivoha, antsasak'adiny mialoha, amin'ny enina ora maraina izany.
Rahampitso, hanomana hetsi-panoherana (ES) ny “Komitin'ny Mpampiasa Transantiago”. Ireo olona izay ao anatin'ity komity ity dia ireo izay zatra mihira, mivarotra zavatra any anatin'ny fiara fitateram-bahoaka ary koa vondrom-piarahamonina manodidina sasany. Ireo olona rehetra ireo dia zatra nahazo karama teny ambony fiara fitateram-bahoaka. Iray amin'ny zavatra atrehan'ny fitondram-panjakana izany. Ary koa, ny ankamaroan'ny Shiliana, dia zatra matory eny ambony fiara fitateram-bahoaka, rehefa mandeha miasa na rehefa avy miasa. Matetika dia eny ambony fiara fitateram-bahoaka mandritra ny ora iray sy sasany. Ankehitriny, afaka tonga any an-trano haingankaingana izy ireo noho ny fiovàna fiara fitateram-bahoaka na fiarandàlamby mandeha any ambanin'ny tany, noho izany tsy misy intsony ny “kolontsain'ny torimaso anaty fiara fitateram-bahoaka”.